2012 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
ခဏတော့ ဝေးဝေးနေမယ် .......
Phyu Lwin November 07, 2012 11 Comments
ဘာလိုလိုနဲ့ နိုဝင်ဘာတောင် ရောက်လာခဲ့ပြီ.....။ နောက်ခဏကြာရင် .... ၂၀၁၂ ကိုကျောခိုင်းရတော့မယ်...။ အချိန်တွေ ကုန်တာအရမ်းမြန်တယ်.... ဒီလိုပဲ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်စီဘ၀မှာ ကျင်လည်နေကြရင်း...... အချိန်တွေက တရွေ့ရွေ့နောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်....။ တစ်ချိန်က အနာဂတ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်ခုထဲကို ချဉ်းနင်းဝင်ရောက် နင်းလျှောက်ရင်း အဲဒီကာလကလဲ အတိတ်ဖြစ်ကျန်ခဲ့.... ဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်နေကြတာပါပဲ....။ နေ့စဉ်တိုင်းမှာ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တစ်ခုဆောင်ရွက် .. စိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုမွေးမြူ.. ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး ဖြတ်သန်းကြ ရင်း ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ဒါန တစ်ခုခုတော့ ရအောင်နေထိုင်ရင်း ဒါဆိုရင် အနှစ်သာရရှိတဲ့ ဘ၀ပဲလေ.....။
အခုတစ်လော ကျမနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်လဲ စာမရေးဖြစ်တာကြာနေသလို ... ဘလော့ဂ်တွေ လိုက်မဖတ်ဖြစ်တာလည်း ကြာနေပြီ...။ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ကနေစပြီး Philippines ကို တစ်လ ခရီးထွက်မှာဖြစ်လို့ ..... ဒီနေရာလေးနဲ့ တစ်လလောက်ကင်းကွာနေဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း .... ခင်မင်ရသော Blogger များနဲ့ ဖတ်နေကျ အနည်းငယ်သော စာဖတ်သူများကို ပြောပြချင်လို့ပါ ...။ ဘာမှမရေးပဲ တစ်လလောက်ပျောက်သွားရင် ရှိရောရှိသေးရဲ့လားလို့ ထင်နေမှာစိုးလို့ ဒီပို့စ်ကိုရေးပြီး ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်...^_^။ ဒီအတန်းအတွက် ဘာသာ ၂ ခုစာကို Tropical region က နိုင်ငံတစ်ခုမှာသွားပြီး Student Project တစ်လသွားလုပ်ရမှာမို့ ... ကျမတို့နှစ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို သွားဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြတာပါ...။ သွားမယ့်နေရာက တောနည်းနည်းကျတယ် .... ပြီးတော့ အင်တာနက်ကလည်း ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲ မသေချာသေးတော့ ဒီကာလကတော့ တော်တော်အဆက်အသွယ်ပြတ်ဦးမယ်ထင်တယ်...။ ပရော်ဖက်ဆာကတော့ အဲဒီမှာ အင်တာနက်မရရင် တစ်ပတ်တစ်ခါ မြို့ပေါ်တက်သုံးကြမယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်.... ။အိမ်နဲ့ ကျောင်းနဲ့ကို အကျိုးအကြောင်း ပြောရုံပဲဆိုတော့ အခုကာလလို မျက်ခြေမပြတ်မသုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့... ;(
ဓါတ်ပုံတွေတော့ သေချာကိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့မှာပါ.. ကင်မရာအစုတ်ကလေးနဲ့ :D ..... ရိုက်သမျှကလဲ သစ်တောပုံတွေပဲ ဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်.... မြန်မာပြည်နဲ့ ရာသီဥတုဆင်တူတော့ တောပုံစံတွေကလည်း သိပ်ထူးခြားမှာ မဟုတ်ပါဘူး....။
အပေါ်က တင်ထားတဲ့ပုံက သေချာပြန်ကြည့်မှ မလှလို့ နောက်တစ်ပုံထပ်တင်လိုက်ပြီ :)) ကိုယ့်ပုံမဟုတ်တိုင်း တင်ချင်သလိုတင်နေတာ.. copyright နဲ့ညှိရင်ဒုက္ခ .... ဘယ်က ဒေါင်းထားမှန်း လဲ သေချာမမှတ်မိတော့ဘူး..။
ပုံပေါ်က စာတွေက ဂျပန်လိုရေးထားတာထင်တယ်.... ဘာအဓိပ္ပာယ်ရေးထားမှန်းလဲ သေချာမသိပဲနဲ့ ပုံလေးသဘောကျလို့ ယူသုံးမိလိုက်ပါတယ်.... :))
လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဘ၀လမ်းမှာ အားလုံး ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့ လက်ကိုဆုပ်ကိုင် ... ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ခရီးဖြစ်ပါစေ.......
See you later ......!!
၃၁ အိမ်ပြန်လမ်း ~~~~
Phyu Lwin November 05, 20127Comments
အမေ ရင်ဖွင့် ကြိုမနေတဲ့လမ်းက..
“သားကြီး”လို့အမေ့အသံ မကြားရတဲ့ တံခါးမှာ
နားတွေ ဆွံ့ အ သွားရော့သလား....
အမေ ဆိုတာ သား ကမ္ဘာကြီးလေ..
ပလီပလာ သား စကားတွေကို
“လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် တည်ဆောက်နေကြတဲ့ ဗိသုကာကြီးတွေဆိုရင် မမှားဘူး”
ဒီတခါ ကံကြမ္မာ ရိုင်းပုံကတော့
မျက်ရည်တွေနဲ့ ...မှိုင်း.. မှုန်... လို့ .....
Phyu Lwin October 31, 20129Comments
နင် သိရဲ့လား ………
ပေါ့ပျက်ပျက်ရယ်သွမ်းသွေး လောကကြီးကို အရေးမထားတဲ့
နင် သိရဲ့လား ………….
မထီမဲ့မြင်နဲ့ လောကကြီးအတွက် ကဗျာမဆန်တဲ့
နင့်အတွက် လှပတဲ့ ကာရံတွေရှိနေတယ် …..။
နင် …. သိရဲ့လား ……..
နင့်အတွက် ၀မ်းနည်းမှုတွေ ရှိနေတတ်တယ် …..။
နင်… သိရဲ့လား ……
နင့်အတွက် လေးနက်တဲ့ ချစ်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ် …..။
နင် သိထားပေးပါ ……
ပြင်းထန်တဲ့ မာနတရားတွေရှိနေတတ်တယ် …။
>>> ၀န်ခံခြင်း ==== ဒီကဗျာလေးက ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတာလေးကို ပြန်သတိရပြီး ရေးကြည့်ထားတာပါ ....။ Magazine တစ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးပြီးကြိုက်လို့ ကူးရေးထားဖူးတယ်..။ ရေးတဲ့သူလည်း သေချာမှတ်ထားခဲ့တယ်...။ ဒါပေမယ့် ရေးထားသမျှစာအုပ်တွေက မြန်မာပြည်က အိမ်မှာကျန်ခဲ့တော့ အခုက ကဗျာပဲ ပြန်ပုံဖော်လို့ရပြီး ကဗျာဆရာကို မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး..။ တစ်ကယ်လို့ ကဗျာဆရာဖတ်မိခဲ့ရင် ဒီကနေ ခွင့်တောင်းသလို ... ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောပါရစေ ..။ နာမည်မမှတ်မိတဲ့အတွက်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်..။ တော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်လို့ပါ .....<<<
Phyu Lwin October 29, 20127Comments
ပစ္စုပ္ပန်မှာတော့ ချိုမြိန်ချင် ချိုမြိန်နေလိမ့်မယ် ...
အနာဂတ်မှာတော့ ... ခါးသီးမလား ..ဆက်လက်ချိုမြိန်နေဆဲပဲလား
ဘယ်သူမှ မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး .....။
မျိုးသန့်တွေ စိုက်ပျိုးလိုက်တိုင်း ... ဗီဇထပ်တူရနိုင်မယ်ဆိုတာ
သေချာမှ မမျှော်လင့်နိုင်တာပဲ ....
မသိနိုင်တဲ့ ..... ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိနိုင်သေးတယ် ....။
အတိတ်က လှုပ်ရှားမှုတွေက အမှတ်တရတွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ် ......
လူတစ်ချို့အတွက်တော့ ချိုမြိန်နေလိမ့်မယ် .....
တစ်ချို့အတွက်တော့ ခါးသီးကောင်းခါးသီးနေလိမ့်မယ် ......။
ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာလည်း ရှိနေမယ် ....
အနာဂတ်ဆိုတာလည်း .... ရှိနေဦးမှာပဲ ........
ကိုယ်စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုက ..... ဘာတွေသီးပွင့်လာမလဲ ....
ချိုမြိန်မှုဖြစ်မလား ...... ခါးသီးမှုဖြစ်မလား ......
ကိုယ်စိုက်တာတော့ ကိုယ်ပြန်စားသုံးရမှာပဲလေ . ~~~~~~~။
မပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် ........ ငါတည်ဆောက်နေဆဲ .................................။
♥ ♥ ~~ You said ~~ ♥ ♥
Phyu Lwin October 24, 2012 10 Comments
You said ,,, 'I love the Sun' ~~
You always go under shelter .......
you said ,,, ' I love the Rain' ~~
But whenever it's raining,
You always cover with an umbrella ......
You said ,,, ' I love the Wind' ~~
But when the Wind comes ,,
You always close your windows. ...
That's why I'm afraid if you say to me once, " I love you " ~~~
ဒါကြောင့်ပေါ့ .... ချစ်တယ်လို့ပြောပြီး သံယောဇဉ်တွေ ရစ်ပတ်ပြီးကာမှ .... နင်အဝေးကို ထွက်သွားမလား ကြောက်နေမိတယ် ... ♥ ♥
အခုအတန်းကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ course work က အရင် semester တွေမှာ အားလုံးလိုလို ပြီးထားပြီးသားမို့ တက်စရာအတန်းလည်း သိပ်မရှိတာရယ်.. ဂျာမာန်စကားလည်း သေချာပြန်လေ့လာချင်တာနဲ့ပဲ language class တွေ တက်ဖြစ်တယ်..။ facebook မှာ German language ကိုလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက် တော်တော်ကောင်းတဲ့ page တစ်ခုတွေ့မိတော့ အမြဲတမ်း အဲဒီက တင်တဲ့စာတွေ ဖတ်ဖြစ်နေရင်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်း ဒီကဗျာလေးကို သဘောကျလို့ ဒီမှာ ဝေမျှလိုက်လိုက်တာပါ ..။
ဘာသာစကားတွေ လေ့လာဖို့ စိတ်ဝင်စားလို့ ဂျာမာန်ဘာသာကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ဒီပေ့ခ်ျလေးက အရမ်း အထောက်အကူဖြစ်လို့ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်..။
နောက်တစ်ခုက စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာသလေးတစ်ခုပါ ... ။ အင်္ဂလိပ်လို အမျိုးမျိုးသုံးပေမယ့် ဂျာမာန်လိုတော့ တစ်လုံးတည်းနဲ့ အခြေအနေအတော်များများမှာ သုံးနိုင်တဲ့ လူပြောများတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုပေါ့...။ ဟာသသက်သက်ပါ :)
Wish you all be always HAPPY !!
# Love Poems # ဘာသာပြန်
Labels: Love Poems, ဘာသာပြန်